2016 – Vanoda Zvinhu
Ndainge ndakarambana nemurume wangu asi tainge tine vana 3 vese vainge vakura vaitova kuprimary school. kunyangwe tainge takasiyana hedu chinhu chataizama kuita kushanda tese kuti vanhu vedu vakure vachiziva kuti vabereki vedu vanotida saka taipota tichiita tuma family outing zvekuti vana vedu vazive kuti kunyangwe tisingagare tese but taigona kuyenda
Categories : DzesviroTags : KukwirwaLeave a comment
On May 18, 2016 March 1, 2018 By svirorist
Veduwee chihure chakangozvipengerwa hacho, handingati ndiri hure per say, I was married to my one and only husband for 16 years. After I was caught, i realised that munhu wese aneka trace kana kuti ka We were all going to school to attain higher qualifications. We had planned to relocate
Categories : DzesviroTags : nyoroLeave a comment
Ndaigara muKadoma apa ndainge ndichangotanga kugara ndega graft ndaiva naro zvinhu zvanga zvisati zvakunetsa munyika yedu.Ndainge ndava nemwedzi muviri ndichigara pamba apa ndokutozivana nevanhu vazhinji vemuraini asi ndaingovawo munhu akazvinyararira ndisingatsvage zvakawanda. Mumwe musi ndichibva kubasa ndakasvika ndiwane panext door pakazara mota panze ndokubva ndapfuurira kuyenda pamba pandaigara ndikasvika pangori
Life is full of surprises zvekuti dzimwe nguva unoshaya kuti zvirikufamba sei. Ndiri mumwe wevanhu vakabva kuZim kudhara ndinogara zvangu ku Kyalami Estate, kanzvimbo kari quiet apa kakazara varungu. Mumwe musi ndichibva hangu kubasa ndakaita kaminor accident but mota yakabva yaita ma1 zvekuti ndainge ndakushandisa mataxi, problem yaizovapo ndeyekufamba kubva
Categories : DzesviroTags : ThreesomeLeave a comment
Ndakanga ndakagara hangu pabar pachibva pasvika mumwe mukomana ainge ari handsome apa akasimba kunge anoita workout everyday. Akanditi ndikutengere drink here ndichibva ndati as long as usingazode kundisvirira drink iyoyo please, go ahead, takabva taseka hedu.Mukomana uyu akati anonzi Tim aigara around nebrother yake Tom vese vainge vasati varoora. Inini
Nyaya yangu yakaitika ndayenda kuSA kunotsvaga basa ndokubva ndariwana muneimwe restaurant muPretoria. Yainge iri Monday and always this day raigara riri quiet zvekuti manager ndipo paaiyenda paOff and most of the staff taishanda tiri 3 waiters,supervisor nekitchen staff yese saka mostly taicleaner hedu. Pandakasvika ndakaona ndanyorerwa duty rekuti ndicleane walk